इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्नुहोस् 🥇
इन्स्टाग्राममा कसैबाट एक कथा साझा गर्नुहोस्
सामाजिक नेटवर्क को साझा लक्ष्य सधैं शक्ति हो मानिसहरुसंग सामेल हुनुहोस्। कि त लिंक मित्रहरु र सहकर्मीहरु को माध्यम बाट एक विशेष क्याम्पस नेटवर्क को माध्यम बाट, जस्तै फेसबुक को मूल को रूप। वा यसलाई ठूलो तराजुमा लिनुहोस्, जुन आज छ। एक प्लेटफर्म जुन विश्व र मार्गमा क्रान्तिकारी छ एक दूरीमा कुराकानी, इन्स्टाग्राम भएको छ। र यस अनुप्रयोगले स्थिर आविष्कारहरू ल्याएको छ, जस्तै इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्ने।
हाल, नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरू प्राय जसो इन्स्टाग्राम स्टोरीहरू प्रयोग गर्छन्। यस तरिकाले, को प्रसार प्रवृत्ति एक आँखा झिम्केमा इतिहास संभावित थियो। यो किनभने किनभने प्रयोगकर्ताले उनीहरूको प्रोफाईल ओभरलोड नगरीकन सबै कुरा पोष्ट गर्न सजिलो हुन्छ। देखि, इन्स्टाग्राम कथाहरू स्वतः मा मेटिएका छन् 24 घण्टा। यद्यपि, प्लेटफर्मले भेट्टाएको एउटा आवश्यकता भनेको प्रयोगकर्ताहरूलाई अर्को व्यक्तिको कथा इन्स्टाग्राममा साझा गर्न अनुमति दिन सहयोग गर्ने थियो।
थप रूपमा, इन्स्टाग्राम कथाहरू र उनीहरूमा ट्याग गर्ने क्षमताको उपयोग गर्नु अघि नेटवर्कले नयाँ अपडेट सुरू गर्नुपर्‍यो। ती मध्ये, अधिक गर्न उपकरणको दायरा विस्तार गर्दै आकर्षक र रचनात्मक कथाहरू, यो एक थियो। तर, होम रन जुन अनुप्रयोगलाई दिन्छ, इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्नुहोस्। जे होस्, अन्तिम उल्लेख बजार मा एक छोटो समय लिन्छ, यो को इच्छा सन्तुष्ट छ प्रयोगकर्ताहरू नेटवर्क को।
इन्स्टाग्राममा कसैको कथा साझा गर्नका लागि आवश्यकताहरू
इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्न, प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको संस्करणको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ सञ्चालन प्रणाली। साथ साथै, कि पोस्ट गरिएको कहानी साथी वा त्यस्तै हुन सक्दछ जसले मलाई इन्स्टाग्राम स्टोरीहरूमा केही फोटोहरूमा तपाईंसँग भएको बताएको छ। साथै, यो मूल्या should्कन गरिनु पर्छ कि अनुप्रयोगको संस्करण सबैभन्दा छ हालै, इच्छित उपकरणहरूको उपयोग गर्न सक्षम हुन।
तपाइँ लेबल हुनु पर्छ
इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथाहरू साझा गर्न सक्षम हुनु पर्ने आवश्यकताले यो शर्त राख्दछ कि यदि कुनै प्रयोगकर्ताले अरू कसैको कथा साझा गर्न चाहन्छ भने, यसलाई लेबल गर्नुपर्दछ। साझेदारी गर्न सक्षम हुन भएकोले इन्स्टाग्राम स्टोरी तपाईले प्रयोग गर्नु पर्छ सीधा सन्देश द्वारा पठाईएको प्लेटफर्म एक पोष्टमा ट्याग हुँदै गरेको समयमा।
यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ विकल्प हो, मात्र आईओएस र एन्ड्रोइड हालसालैका व्यक्तिहरूले इन्स्टाग्राममा अन्य व्यक्तिको कथाहरू साझेदारी गर्ने उपयोग गर्न सक्षम हुनेछ, किनकि अलि पुरानो संस्करणको साथ यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्षम हुनु हुँदैन, र नेटवर्क अनुप्रयोगहरू जुन गर्न सकिन्छ पनि प्रतिबन्धित छ।
इन्स्टाग्राममा कसैको कथा कसरी साझेदारी गर्ने?
शानदार इन्स्टाग्राम कथाहरू, सबै इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूको फोटोहरूको सञ्चार र प्रकाशनको लागि सुविधा पुर्‍याएको छ। तसर्थ, नेटवर्क को कथाहरू मा तपाईं पनि शामिल लेबल गर्न सक्नुहुन्छ, वा जो कोही चाहनुहुन्छ। कहिलेकाँही केहि प्रयोगकर्ताहरू हुन्छन् ट्याग गरिएको केहि कथामा तपाईलाई मनपर्दछ। त्यसकारण, यस प्लेटफर्मले आफ्ना ग्राहकहरूको आवश्यकताहरूलाई अगाडि राख्दै, इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्ने विकल्प सिर्जना गरेको छ। र त्यसो भए, प्रयोगकर्ताले गर्न सक्छन् सेयर पोस्ट गर्नुहोस् जहाँ यो लेबल गरिएको छ।
तार्किक रूपमा, इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्न, प्रयोगकर्ताको सामाजिक नेटवर्कमा एक खाता हुनुपर्दछ। तसर्थ, उपकरण को उपयोग गर्न को लागी, तपाईं पर्छ प्लेटफर्म पहुँच गर्नुहोस् तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ।
एक पटक, प्रयोगकर्ता पहिल्यै पहिचान भइसकेको छ र प्लेटफर्म पहुँच गरिएको छ। व्यक्तिगत हुनु पर्छ तपाईंको ट्रे जाँच गर्नुहोस् सीधा सन्देश। स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा फेला पारिएको मेलबक्स आइकनमा क्लिक गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेमा एक पटक, तपाइँले जाँच गर्नु पर्छ कि तपाइँको कुनै साथीले कथामा ट्याग गरे। पछि लेबल सूचना सन्देशमा जानुहोस्।
जब, प्रयोगकर्ताले च्याटमा प्रवेश गरेको छ व्यक्तिले उसलाई पहिले कथामा ट्याग गरेको थियो। त्यहाँ अधिसूचना सन्देश अन्तर्गत हेर्न, वाक्यांशको साथ ट्याब "यो कथा तपाईंको कथामा थप्नुहोस्"। विकल्पमा क्लिक गरेर, प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्न सक्दछ।
अब, प्रयोगकर्ताले आफ्नो रचनात्मकता सजावटको लागि प्रयोग गर्नै पर्छ, यदि उसले चाहेमा, कथा उसले साझेदारी गरिरहेको छ। थाहा छ कि प्रकाशनको मूल पहिचान पट्टी कहिले देखा पर्नेछ तपाइँको प्रोफाइल मा साझा गर्नुहोस्। थप रूपमा, व्यक्तिले स्टिकर, उपहार, समर्पण, र अन्यहरूको प्रयोग मार्फत तिनीहरूको कथा सेट गर्न सक्दछ।
अन्तमा, कहानीमा रचनात्मकता कार्यान्वयन पछि, व्यक्तिले गर्नै पर्छ प्रकाशनमा क्लिक गर्नुहोस्। र तयार छ, यस तरीकाबाट प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा अर्को व्यक्तिको कथा साझा गर्ने प्रयोग गरेको छ। सफलतापूर्वक लक्ष्यमा पुगिसकेपछि, प्रयोगकर्ताले केवल प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ र छवि कति प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस्।
इन्स्टाग्राममा कसरी ट्याग गर्ने, कसरी गर्ने सिक्नुहोस्!
तपाईंको कम्प्युटरबाट इन्स्टाग्राममा सन्देशहरू कसरी पठाउने